Howl-galo amni baaritaan oo ka bilowday Jowhar xili xalay qarax lala eegtay dhalinyaro (Dhegeyso) – Radio Daljir
Howl-galo amni baaritaan oo ka bilowday Jowhar xili xalay qarax lala eegtay dhalinyaro (Dhegeyso)
Oktoobar 3, 2013 5:58 b 0
Jowhar, October 3, 2013 – Magaalada Jowhar ee xaruunta gobolka shabeelaha dhexe waxaa maanta ka bilowday howl-galo balaaran oo amni, kuwaas oo ay fulinayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan degmada.
Howl-gallada ayaa bilowday kadib weerar xalay ka dhacay meherad dhalinyaro ay fadhiyeen oo ku taala gudaha magaalada, halkaas oo khasaare ka soo gaaray dhalinyaradii markii kooxo hubaysan oo ay Bam-gacmeed ku weerareen.
Hal ruux ayaa dhintay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray markii rag hubaysan ay Bamka ku tuureen goobta lagu caaweeyo oo ay dhalinyaradu fariistaan ee bartamaha magaalada Jowhar.
Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay dad ku qabteen howl-gallada ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee xaruunta shabeelaha dhexe, dadka ayaa u badan kuwa laga shakiyey.
Taliyaha nabad-sugida gobolka shabeelaha dhexe ee dowladda Soomaaliya Cabdi Ibraahim Maxamed ayaa daljir u sheegay in weerarka ay kooxo hubaysan oo nabad-diid ah ay ka dambeeyeen isla markaasna ay baaritaano wadaan oo lagu baadi goobayo ragii weerarka ka dambeeyey.
DHEGEYSO: Maxamuud cabdi Ibraahim oo daljir ka tirsan oo waraystay Cabdi Ibraahim Maxamed
Baahin: Khamiis 3 Oct -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle